Ukuqeqeshwa kwezingubo | Ukudweba izifundo zabahloli | Ampp
Cha: F-32, 1 Floor, 2nd Avenue, Anna Nagar East, Chennai
I-ONLINE COATINGS Portal ukuthi ipulatifomu enamandla futhi enolwazi yoQeqesho lwabahloli Bokumboza kanye nabahloli Bokudweba okuyingxenye ye-HTS COATINGS. Isebenza nge-Industrial Coating ehlobene ne-Surface Treatment, Ezinemthombo izicelo, Ukuhlolwa Kokudweba, kanye nezindlela zokuhlola
Amamojula Wabahloli Bokumboza Amakhemikhali adaliwe ngongoti abanolwazi lokumboza izimboni kanye nochwepheshe. I- isazi sokumboza ingemuva kusuka ku-Oyili, iGesi, i-Petrochemical, i-Marine, i-Shipbuilding, i-Heavy Industries. Abafundi abaningi abasebenza e-Onshore, Offshore, Pipeline, Process Industries bahlomulile kulezi zinhlelo ze-E-learning. Esikhathini esizayo esiseduze, sithatha isinqumo sokwethula izifundo eziningi ezihlotshaniswa neminye imisebenzi efana nokushisela insimbi, ukuvimbela imishini, ukuvimbela umlilo, ukushisa okushisayo, i-Thermal Spray, i-Refractories nokuphathwa, njll.
Ukuqhubekela phambili Komsebenzi Wokuhlola
Ngemuva kokuphothula izifundo eziku-inthanethi, isazi singasebenza kanjena: -
Injini Yokulawula Ukugqwala
Umhloli we-QC / QA
Isazi Somqeqeshi Ovikelayo
Isazi Sokuhlaziya Ukuhlaziya Isazi
Izinzuzo Zokuqeqeshwa Kokugcoba Okuku-inthanethi
Lezi zinzuzo ezilandelayo zazinemininingwane ehlobene nokuqeqeshwa kwabahloli be-Coating Online
Imodi ye-E-learning / Online ithuthukisa ukufinyelela komhlanganyeli 24 X 7 & 365 izinsuku. Bangasebenzisa lolu qeqesho oluku-inthanethi emsebenzini / ekhaya / isikhathi sokuphumula / amaholide ngokufinyelela okulula.
Imodi eku-inthanethi inciphisa izindleko ze-visa / indiza / ukugibela nezokulala uma kuqhathaniswa nemodi ye-Onsite. Ngaphezu kwalokho, ukungabikho kwakho emsebenzini kanye nokulahlekelwa okulandelayo komholo kungagwenywa.
Uzozulazula kumasilayidi ezifundo / izingxoxo / izingxoxo ezibukhoma / amavidiyo abukhoma / Imibuzo / izabelo ngaphandle kokufunda noma ukuqeda okuphoqelekile. Uzokweqa / ukuphela / ukuhlehlisa / ukubuyisela noma yiziphi izikhathi nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwemikhawulo
Ama-ll course slide / okuqukethwe kwamukelwa ngesethulo somsindo ukunweba inkumbulo yomfundi. Lokho kuzokhunjulwa phakathi nesigaba sonke sezifundo eziku-inthanethi.
Zonke izifundo zethu ziphethe izabelo ezifanele nemibuzo yokuthuthukisa ulwazi lwabafundi. Ukuhlolwa okwenziwa ngezikhathi ezithile kuzosiza abafundi ekususeni ukuphothula izifundo zokugcina.
Okuqukethwe kwethu okuku-inthanethi kuhambisana nekharikhulamu Yomhloli Wamazwe Omhlaba. Ulwazi lwethu lwe-Online Training luzoba wusizo ukusula zonke izivivinyo zezitifiketi zomhlaba wonke.
Imali ekhokhwayo ephansi kakhulu
Kusukela ngo-2014, isiqubulo se-HTS COATING ukuletha imfundo esezingeni eliphakeme ku-Industrial Coating Inspection and Application segments. Ngakho-ke imali ye-Course and Exam ihlala incintisana futhi iphansi kakhulu uma iqhathaniswa nabahlinzeki bezokuqeqesha abakhona.
Ochwepheshe be-HTS COATINGS bangamaphayona ezingxenyeni Zokufakwa Kokumboza Kwezimboni kanye nezingxenye Zokuhlola. Ngakho-ke, zonke izifundo zethu nokuqukethwe ziletha ngezinguqulo zobuchwepheshe bokunamathela obusha.
Izinzuzo Zokugqoka ku-inthanethi nge-HTS COATINGS
Abafundi abaningi bathole ukungagculisi isikhathi esifushane ngenkathi befunda izifundo ze-International Inspector Training. Abahlinzeki Bezitifiketi Zamazwe Ngamazwe abanjengoFROSIO / I-SSPC / INANI / I-BGAS / ICORR inikezela ngamazinga ahlukahlukene ezitifiketi. Ngenxa yesikhathi esifushane salezo zifundo zamazwe omhlaba, Abafundi badinga amakilasi angeziwe okulungiselela. Ngakho-ke, bafuna zonke izinhlelo zokuqeqesha nezitifiketi. (Umqeqeshi Wokumboza Umhloli / Umhloli Wokumboza i-Frosio / Umhloli we-SSPC / Isitifiketi se-Frosio / Umhloli Wokudweba)
Ukunqoba ukuqeqeshwa isikhathi esifushane, ama-Online Coatings aklanyelwe le webhusayithi ngezifundo ezahlukahlukene zokulungiselela ama-HTS COATINGS. Le ngxenyekazi ye-E-learning yakhelwe ngokucophelela zonke izahluko zokuqonda okulula komfundi ngobuchwepheshe bokuhlola ukumboza. Manje, sengeze izinhlelo zokulungiselela ezihlobene ne-SSPC ne-FROSIO. Maduze, sizofaka ezinye izinhlelo ezihambisana nokukhetha komfundi.
ONLINE ezinengilazi futhi HTS ezinengilazi, ube esefisela abafundi bethu ebangeni lelilandzelako umsebenzi kangcono Oil, Gas, Petrochemical, futhi Heavy Industries.
IMISEBENZI YOKUFUNDA KWAMI
Abahloli Bokumboza & Izitifiketi ezisebenziseka Kwezimboni zethu
Abahloli Bokumboza Nezitifiketi: Isimo esibucayi somnotho kanye nenani labangasebenzi kulo mhlaba akunakulinganiswa ngezinhloso nezizathu eziningi. Ngaphezu kwalokho, i-COVID 19 yakamuva
20 / 07 / 2020 Awekho amazwana
IZINDLELA ZOKULUNGISELELA IZINDLELA ZOKUQHAWULA INDAWO
Ukusebenza kokumboza kwe-Industrial kanye nomjikelezo wempilo kunqunywa ngezindlela ezahlukahlukene njengezindlela ezanele zokulungiselela indawo, ukukhethwa kohlelo lokumboza, imvelo, kanye
14 / 07 / 2020 Awekho amazwana
Ukugcina ukuvikelwa Ubuqotho buyinkinga efakazelwe ngonjiniyela, abahloli, nabaphathi ku-Oyili, igesi, iPetrochemical, nezinye izimboni ezihlangene. Ihlaziya ukusebenza kokuvikela, ithuthukise ngokomzimba
Abasebenzisi bamazinga we-ISO / SSPC Emhlabeni jikelele
Copyright © 2021 Ama-coatings online | Inikezwe amandla yi I-Astra WordPress Theme